Ingabe ukukhulelwa kungahamba njalo ngenyanga?
Ngabe ngesikhatsi ukhulelwe uya njalo ngenyanga futhi ngani?
Siphendula imibuzo futhi sikutshele ukuthi kungani ukukhulelwa kunenyanga
Umzimba wethu kuyinkimbinkimbi futhi eyinkimbinkimbi, engakaqondwa ngokugcwele. Futhi ngezinye izikhathi unikeza izimpawu ezinjalo eziphikisanayo ezingazidibanisa ngisho nodokotela abanolwazi. Abesifazane, isibonelo, bangesabisa kakhulu esikhathini esizayo ngesikhathi sokukhulelwa. Ngenhlanhla, lesi senzakalo sekuyisikhathi eside sifundwe, futhi amantombazane anamuhla angafunda ukuthi yiziphi lezi zimfihlo. Njalo ngenyanga noma cha - ake siyiqonde!
Kungani ngesikhathi sokukhulelwa kungahamba ngenyanga?
Uma usuvele uyayazi ngesimo sakho "esithakazelisayo", noma yikuphi ukwabiwa akuhambanga - lokhu akusiyo esikhathini. Into yukuthi inyanga zonke ayikwazi ukuhamba nokukhulelwa, njengalesi sikhathi ukuvuthwa kwamaqanda kumisiwe, ngakho-ke ukulahlwa kwe-endometrium kanye negazi akukwenzeka. Ngokuvamile ukubonakala kokuphuma kwegazi kwenzeka ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Isikhathi sokufakelwa kweqanda elifakwe emanzini odongeni lwesibeletho ngezinye izikhathi singalimaza izitsha ezincane, okubangela ukuthi kuphazamise kancane kancane. Lokhu kwenzeka, kodwa kaningi inqubo yokufakelwa kwemvelo ibonakala ingabonakali ngokuphelele. Futhi, uma iqanda elikhulelwe lingenakulinywa ngaphambi kokuqala kokuya esikhathini, ukuphuma kwegazi kungenzeka. Iseli alihlanjulwanga emzimbeni, awukwazi ukukhathazeka.
Isizinda sangaphandle se-hormonal esibuhlungu noma esivuselelayo singabangela nalesi simo. Iqiniso liwukuthi ngesikhathi sokukhulelwa kukhona ukwanda okweqile ezingeni le-progesterone ne-gonadotropin, okuvusa ukukhipha. Ayikho ingozi yalokhu kumama ozayo noma ingane.
Lapho kunesidingo esengeziwe sokukhathazeka, uma kungabelwe, kepha kuphuma igazi. Lokhu kungase kube yimbangela yokukhulelwa kwesisu. Ngokuvamile, ngokuphuma kwegazi okuningi, ubuhlungu obuchotshozayo buvela esiswini esingaphansi. Kulo mzuzu kuyadingeka ukuba ubize ngokuphuthumayo i-ambulensi, ngoba awukwazi nje ukulahlekelwa ngumntwana, kodwa futhi ufa ngokulahlekelwa igazi.
Futhi isibonakaliso esibi siyinhlanganisela yokuhlunguphazwa kwesibhakela kwesobunxele noma kwesokudla kanye ne-ovary kwesibhakabhaka noma emnyama. Cishe lokhu kungukukhulelwa kwe-ectopic. Ukuhlolwa kungabonisa imiphumela emihle, njengokukhulelwa okuvamile. Ungalibali ukuhamba udokotela, ngoba lokhu kuyingozi kakhulu.
Izifo ezingenayo i-intrauterine noma ukulimala kwesisu. Njengomthetho, lokhu kwenzeka emibhalweni yokukhulelwa kamuva. Kulesi simo, udinga ukuphuthumisa ukuhlolwa kwe-ultrasound ngokushesha, uhlole futhi uthole ukuthi kungaba yini isizathu.
Indlela yokuvimbela ukuphuma kwegazi ngesikhathi sokukhulelwa?
Okokuqala, udinga ukubona njalo igciwane lakho lomzimba. Udokotela onolwazi kuphela ozokwazi ukusola ukuthi kukhona okungalungile okwamanje lapho konke kungalungiswa khona.
Ungakhohlwa isimo sakho somzwelo. Ukucindezeleka kungenye yezimbangela eziningi zokukhulelwa kwesisu. Zama ukwesaba okukhulu, ukhathazeke futhi ubheke impilo ngokuthe xaxa.
Ukudla okunempilo, ukulungiswa kwosuku olufanele kanye nomoya omusha nakho kuyisiqinisekiso sokuthi ukukhulelwa kuzoqhubeka ngaphandle kwezinkinga.
Njengoba usuvele uqonda, ngeke kube khona inyanga ekukhulelweni ngencazelo. Imvelo yokubukeka kwegazi ihluke ngokuphelele, ngakho-ke kulokhu, ukuqagela nokuzenza imithi kuyingozi. Zizinakekele futhi uphile kahle!
Ama-varicose veins ngesikhathi sokukhulelwa, ukuvuvukala
Indlela yokukhohlisa umyeni wakhe ukuba ahlale ekhulelwe
Yisiphi isifuba okufanele sibe nokukhulelwa
Ukutshala izihlahla ze-ovum, ukukhipha, izimpawu zokukhulelwa
Isitayela esisheshayo esisheshayo esiphezulu se-Top-4
Isaladi efudumele nge isipinashi kanye omisiwe
Kungakhathaliseki ukuthi sisondela komunye nomunye
Indlela yokugcoba amakhowe ekhaya
Okwenza amadoda angaqondi izinkinga zabesifazane
I-Horoscope ye-Lion-Woman ngo-December 2016
Indlela yokuhlanza i-suede ekhaya?
IWundlu elisetheni elinamatamatisi newayini
Umboniso weCartier Jewellery
Ukukhetha i-bra elungile
Jamu kusuka ku-orange crusts
Indlela yokuqonda ukuthi indoda ifuna ukukuphonsa